<p>- Tape Dispense များကို Golden Heir Trading Co.,Ltd အထူးဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။</p><p>- ကျွန်တော်တို့ Golden Heir Trading Co.,Ltd ကို ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပါနော် ရန်ကုန်မြို့ တွင်း Delivery Free ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ .......</p>
<p>Interactive display features from note-taking to intuitive navigation</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Versatile connectivity and an ergonomic design</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Innovative touch display technology for smooth writing plus UHD picture quality</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Portable, wheel-based stand (sold separately)</p>
Samsung Hotel TV (HG32AE460)
<p><span style="white-space:pre">	</span>Expand In-Room Content Delivery Possibilities with Samsung’s HE460 Hospitality Display</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Main Feature &amp; Benefits 1: DEFINITION SYSTEM/ARCHITECTURE</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Hotels can use the latest hospitality management technology to deliveradifferentiated guest experience.&nbsp;</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Increase Hotel Brand and Offerings Visibility withaWelcome Video Channel</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Treat guests withacustomized, cost-efficient Home Menu</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Enjoy More Efficient Installation through Improved Plug-and-Play Capabilities</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Headphone ID compatibility</p><div><br></div>
Samsung Smart Signage (PM43H)
<p><span style="white-space:pre">	</span>All-in-one display solution with embedded MagicInfo Player S4 powered by TIZEN™</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>IP5x certification and non-glare panel to withstandarange of environmental conditions</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Sleek design with slim depth (30.5mm) and narrow bezels (9mm)</p>
Samsung Digital Signage (DC55E)
<p><span style="white-space:pre">	</span>Affordable digital signage that supports 16/7 operation and 350-nit brightness</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Easy and simple content management with embedded MagicInfo Lite</p><p>•<span style="white-space:pre">	</span>Slim design and expanded connectivity options for space efficiency</p>
<p>အိမ်တိုင်း ရုံးတိုင်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာလေးက ပြက္ခဒိန်လေးပါပဲ။</p><p>လက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အလှချိတ်ဆွဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြက္ခဒိန်အမျိုးမျိုးကို ရွှေနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီနော်။</p><p>ကျွန်မတို့ရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစုကို ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်မေးလိုက်တာနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်တဲ့Table Calendar / Wall Calendar / ရွက်ဆုတ် Calendar စသဖြင့် Calendar မျိုးစုံ ကို ကျွန်မတို့ ရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်တိုက် မှ Paper အမျိုးမျိုး ၊ Size အမျိုးမျိုး ၊ Color အမျိုးအမျိုး ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။</p>
Wall Calendar Service
<p>အိမ်တိုင်း ရုံးတိုင်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာလေးက ပြက္ခဒိန်လေးပါပဲ။</p><p>လက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အလှချိတ်ဆွဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြက္ခဒိန်အမျိုးမျိုးကို ရွှေနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီနော်။</p><p>ကျွန်မတို့ရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစုကို ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်မေးလိုက်တာနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်တဲ့Table Calendar / Wall Calendar / ရွက်ဆုတ် Calendar စသဖြင့် Calendar မျိုးစုံ ကို ကျွန်မတို့ ရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်တိုက် မှ Paper အမျိုးမျိုး ၊ Size အမျိုးမျိုး ၊ Color အမျိုးအမျိုး ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။</p><div><br></div>
<p>နှစ်ကုန်ခါနီးပြီဆိုရင် မှတ်စုစာအုပ်(Note Book) လေးတွေ Company တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းကို အစဉ်တစိုက်အားပေးကြတဲ့ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူတွေကို လက်ဆောင် ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်လေးထဲမှာ Company အကြောင်း၊လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းလေးတွေကို ထည့်သွင်းပြီး ပေးလာကြတယ်။</p><p>ဒီလိုလှပသေသပ်တဲ့ မှတ်စုစာအုပ်(Note Book) လေးတွေ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစုကို လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။</p>
Paper Bag လက်ဆွဲအိတ်အမျိုးမျိုး
<p>လက်ဆွဲအိတ်လှလှလေးတွေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ကြော်ငြာလိုက်ပါ။</p><p>မိမိတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူသူမိဘပြည်သူတွရဲ့ လက်ထဲကို လက်ဆွဲအိတ်လှလှလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာကလည်း ကြော်ငြာခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဒီလိုလှပသေသပ်တဲ့ လက်ဆွဲအိတ် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုူကို အပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွှေနိုင်ငံကို လှမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။</p>
<p>မုန့်ဘူးလေးတွေ မှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရွှေနိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်နော်။</p><p>မုန့်ထည့်တဲ့ဘူးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ စက္ကူသားအထူ Art Card နဲ့ရွေးချယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။</p><p>ဒါကြောင့် မိမိလိုချင်တဲ့ ဒီဇီုင်း ကာလာ စာရွက်အသားအမျိုးမျိုး ဆိုဒ်အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး လှပခံ့ညားတဲ့ မုန့်ဘူးအမျိုးမျိုးကို လည်း စိတ်တိုင်းကျ အပ်နှံနိုင်ပါပြီနော်။</p>
<p>ဒါကလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အရာပါ!</p><p>ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကဒ်က ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ထိထိမိမိနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်!</p><p><br></p><p>ဒီလို လိပ်စာကဒ်ကို မိမိကုမ္ပဏီ တံဆိပ် အမှတ်အသား ကာလာ ဒီဇိုင်း စသဖြင့် ခေတ်မီမီ စတိုင်ကျ ဆွဲဆောင်မှု့ရှိစွာနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ လိပ်စာကဒ် ဒီဇိုင်းအတွက် ရွှေနိုင်ငံကိုအခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။</p><p><br></p><p>လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်တဲ့ လိပ်စာကဒ် အမျိုးမျိုးကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး စာရွက်အသားအမျိုးမျိုးဖြင့် စိတ်ကြိုက်မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီနော်။</p>
Optoma X316 Projector သည္ အလင္းေရာင္ထုတ္လြတ္အားေကာင္းမြန္တဲ့ lens ပါရွိပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႕၏ အစည္းအေဝးတြင္ Optoma X316 Projector ကတင္ဆက္မူတြင္ အလင္းေရာင္ထုတ္လြတ္မူအားေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ Optoma X316 Projector ကိုေလ့က်င့္ခန္း၊ အစည္းေဝးခန္္း၊ စာသင္ခန္းတို႔တြင္ အသံုးၿပဳႏုိင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ဝယ္လိုေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္ Customer မ်ားအတြက္ Optoma အမွတ္တံဆိပ္ Projector ကုိ Concordia Myanmar Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူႏုိင္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။ The Optoma W316 will help you present with confidence and ease. Withapowerful 3400 lumen bright image and superb 15,000:1 contrast ratio, the Optoma W316 delivers fantastic widescreen presentations with rich, vibrant colors and sharp, easy to read text, graphics and video. Packed with an impressive array of connectivity options,a1.1x zoom ratio projection lens for placement flexibility and up to 10,000 hour lamp life, the Optoma W316 is ideal for use in classrooms, meeting rooms and training rooms.
Optoma X305ST XGA DLP ပရုိဂ်က္ရွိ lampသည္ DLP chip system ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ နာရီေပါင္း ၆၀၀၀ အထိအသုံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ BrilliantColor နည္းပညာကို ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳထားၿခင္းေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ၿခည္ကို မိတ္ေဆြတို႔ လိုအပ္သလို အသံုးၿပဳႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Optoma ပရိုဂ်က္တာသည္ ဗီဒီယိုႏွင့္အၿခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ The Optoma X305ST XGA DLP Full 3D Short Throw Projector delivers 3000 lumens of brightness withalow noise level of only 29dB. It featuresasharp 18,000:1 contrast ratio, support foravariety of 3D formats, and an XGA 1024 x 768 native resolution. The projector supports short throw performance and is powered byaDLP chip system withalamp that lasts for up to 6000 hours. The X305ST features BrilliantColor technology as well, which provides multi-color processing that produces accurate colors on the screen.